IPFS: Nidaam Fayl Sare ah oo leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain | Laga soo bilaabo Linux
IPFS: Nidaamka Faylka ee horumarsan leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain
IPFS: Nidaam fayl horumarsan oo leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain
IPFS ballanqaaday inuu dhiirrigelinayo a Shabakad loo qaybiyey, maadaama ay tahay a Borotokoolka P2P hypermedia (Is-Fiir-Qof - Qof ilaa Qof) si loogu talagalay in loo sameeyo deg deg, badbaado iyo furitaan furan.
Waxay ku leedahay magaceeda xarfaha bilowga weedha oo Ingiriisi ah, Nidaamka Faylka Gaarka ah, taas oo macnaheedu yahay Isbaanish, Nidaamka Faylka ee Interplanetary, iyo in xaqiiqda ay tahay, Nidaam Fayl horumarsan leh P2P iyo tikniyoolajiyadda Blockchain.
Sida oo kale Tikniyoolajiyadda Blockchain, taas oo aan weli dad badani ogeyn, IPFS taas oo ay taageerto, xitaa waa ka sii badan tahay. Laakiin maxaa intaa ka sii badan oo lagu xusay cilmiga farsamada, maadaama ay matalayso isbedelka internetka, sidaan ognahay maanta.
Marka IPFS, wuu buuxin karaa ama beddeli karaa kan hadda socda Borotokoolka Wareejinta Hypertext (HTTP), kaas oo ah midka hadda, iyo heer caalami ah, ku fuliya gudbinta macluumaadka daruuraha (webka). Sidaas darteed, IPFS ujeedadeedu tahay in wax laga beddelo falalka hadda socda ee Internet ku saleysan server dhexe websaydhka si buuxda loo qaybiyey hoostiisa P2P iyo tikniyoolajiyadda Blockchain.
Si loo noqdo a nidaamka faylka loo qaybiyey, oo leh cinwaanno iyo feylal, oo isku xiri kara dhammaan aaladaha xisaabinta iyo waxyaabaha dijitaalka ah, adduunka oo dhan, isla nidaamka faylka.
1 IPFS: Nidaamka Faylka ee Interplanetary
1.1 Waxyaabaha IPFS
1.3 Ku rakibida
IPFS: Nidaamka Faylka ee Interplanetary
In uu website-ka rasmiga ah waxaa jira macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan tiknoolajiyada la yiri, sidoo kale barta rasmiga ah ee GitHub. Si kastaba ha noqotee, kuwa ugu caansan ee laga dhihi karo waa kuwan soo socda:
Hadafkeedu waa in laga dhigo shabakadda mid dhakhso badan, ammaan ah oo furfuran.
Waxay u isticmaashaa teknoolojiyada sirta heerka nidaamka faylka.
Waa qaab dhismeed baahsan oo baahsan laga soo bilaabay.
Waxay u oggolaaneysaa abuuritaanka codsiyada si buuxda loo qaybiyey.
Waa nidaam faylal caalami ah oo la qaadi karo iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda FUSE.
Waxyaabaha ku xiran isticmaalka HASH waxay damaanad qaadayaan sax ahaanshaheeda.
Wuxuu isku daraa isticmaalka teknoolojiyada, sida, Blockchain, Kademlia, BitTorrent, iyo Git.
Borotokoolka qaybinta Hypermedia, oo ay wadato nuxurka iyo aqoonsiyada.
Waxay leedahay adeeg magac bixin oo la yiraahdo, IPNS, oo ah nidaam magac bixineed oo loo yaqaan 'SFS'.
Hawlgalkeedu wuxuu u eg yahay hal raxan bittorrent ah oo isdhaafsada walxaha git.
Waa mid qaybsan, maxaa yeelay waxay taageertaa lakabyo badan oo shaqo oo leh farsamooyin iyo farsamooyin kala duwan.
Dual web, taasi waa, waxay kuu ogolaaneysaa inaad u aragto dukumiintiyada sida webka dhaqameed, taas oo ah, habka caadiga ah HTTPin «https://ipfs.io/<path>», ama habka casriga ah ee daalacashada ama codsiyada, jidka IPFS: «ipfs://URL» o «dweb:/ipfs/URI».
IPFS waa a nidaamka fayl garaynta taas ayaa damaanad qaadaysa helitaanka joogtada ah iyaga, adoo u oggolaanaya nuqulo badan ee kala duwan burooyinka kaas oo taageera shabakadda. IPFS waxay maamushaa isgaarsiinta ku saleysan waxyaabaha la maareeyay, iyadoo la beddelayo magaca (cinwaanka IP ama URL) sida hadda jirta, bixinta a qaabka kaydinta loogu talagalay maadooyinka waxqabadka sare, oo leh xiriiriyeyaal cinwaan looga dhigi karo waxyaabahaaga.
Sidoo kale, isticmaal Aqoonsiyada IPFS kuwaas oo ku xidhan a Xashiishka 'Cryptographic hash' waxa ku jira, oo damaanad qaadaya qaab kriptografi ah, inay u taagan tahay nuxurka faylkaas asal ahaan, illaa laga beddelayo kan xiga, haba yaraadee. Tani waxay keeneysaa faa'iido, ka ilaalinta waxyaabaha ku saabsan khalkhalgelinta aan la fasaxin, iyo hoos u dhigideeda, taasi waa, wuxuu door bidaa isbedel la'aanta waxa ku jira.
Ugu dambeyntiina, waxyaabo kale oo badan oo xiiso leh oo ku saabsan tikniyoolajiyaddan, waa xaqiiqda jirta shabakadda node, khafiifiyaa ama joojisaa ku guul darreysiga waxyaabahaSababtoo ah haddii isgaarsiinta waxyaabaha ku jira hal ku xirnaanta shabakadda ay xumaato, waxaa laga heli karaa mid kale. Iyo sidoo kale, IPFS, isgaarsiinta ayaa badanaa waxtar badan, maxaa yeelay gudbinta dhowr noodhadh isku mar waa wax la oggol yahay.
Si aad u soo dejiso faylasha isha ama rakibayaasha iskutallaabta (Windows, MacOS iyo Linux) la heli karo oo la fuliyo rakibaadda iyo habka loo adeegsado barnaamijyadooda kala duwan, waxaad ku bilaabi kartaa la-tashiga xiriirka soo socda: Desktop IPFS en GitHub.
Waxaan rajeyneynaa taas waa "waxtar yar post" ku saabsan «IPFS», maxaa loola jeedaa «Sistema de Archivos Interplanetario», oo runtii ah mid horumarsan Nidaamka Faylka ee leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain oo leh adeegsi caalami ah iyo baaxad, ayaa dan iyo faa iido weyn u leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta weyn ee baahinta nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo koraya ee codsiyada iyo wixii loogu talagalay «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » IPFS: Nidaamka Faylka ee horumarsan leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain
Tiknoolajiyadda noocan ah horay miyaa loo taageeray mise qorshayaal loogu talagalay daalacashada si ay u hirgeliyaan?
Ku jawaab luiguiok
Salaan Luiguiok! IPFS waxay leedahay macmiil u gaar ah desktop-ka iyo barnaamijyo kale si ay ula socdaan una helaan tikniyoolajiyaddan. Illaa iyo hadda suurtagal kuma ahan daalacashada caadiga ah.
Photopea: baddal Photoshop oo aad ka isticmaali karto biraawsarka aad jeceshahay
Qorshooyinka Canonical ee lagu beddelayo mawduuca Ubuntu 20.04